Inona ireo fomba hitadiavana ny Amazon Search
Mba hahafantarana tsara ny fomba hahatongavana amin'ny mpikaroka Amazon TOP, mila maka sary mazava ny fivarotana amin'ny Amazon ianao. Mba hahazoana antoka fa manorina tsara ny fanentanana ara-barotra ianao, jereo ity lahatsoratra ity mba hijerena ireo lafi-panavaozana tokony ho fantatrao. Ity lahatsoratra ity dia hanokatra ny mason'ny Amazon treasure trove ary hanampy anao hanangona vola any tsy misy ezaka.
Mandehana mankany amin'ny pejin-tranonkalan'ny vokatra ary tsindrio avy eo ireo tolotra atolotra etsy ambany ny famaritana ny vokatra mba hanamarinana ireo tolo-kevitra bebe kokoa. Na dia izany aza, ny zavatra voalohany notadiavin'ny mpividy Amazon dia fividianana boaty. Ity fizarana ity dia mampiseho ny singa tsara indrindra ao amin'ny tsena niche - melhores hospedagem de sitesi. Araka ny antontanisa statistika, 56 lavitrisa dolara amin'ny sandan'ny $ 62 lavitrisa Amazon dia mitranga eto. Fantatr'ireo mpividy fa afaka miantehitra amin'ny safidy Amazon izy ireo satria mitaky ireo endrika samihafa toy ny vidiny, ny kalitao, ny lanjany, sy ny sisa. Amin'ny fampiasana boaty fividianana fividianana, afaka manomboka ny fividianany ny mpanjifany amin'ny alalan'ny fampidirana ireo vokatra ho an'ny karatra famokarana.
Noho ny fifaninanana ambony amin'i Amazona, dia tsy mora ny manjary mpihira voafantina izay maharesy ny boaty. Tsy midika izany fa raha asandratra avo amin'ny Amazon SERP ianao dia ho lasa mpivarotra voafantina. Mba hahazoana ny boaty fividianana, mila manaraka ny toro-làlana Amazon ianao ary ho sarobidy amin'ny mpanjifa anao.
Fanamafisana ny fifaninanana
Ny vokatra izay misy fiantraikany amin'ny toerana misy mpivarotra iray ao amin'ny lisitry ny tolotra: )
Mila manome mpampiasa vidin-tsolika ianao mba hahazoana boaty fividianana. Tafiditra ao anatin'izany fa tsy ny vidin'ny vokatra fotsiny ihany fa ny fandefasana entana ihany koa. Ireo mpivarotra mitady ny vokatra ilaina amin'ny Amazon dia afaka mampitaha ny vidiny rehetra ary azo inoana fa mifidy ny vidiny ambany indrindra eo amin'ny tsena. Mba hitazonana ny vidin'ny fifaninanana aminao dia mila mitarika fanadinana fifaninanana amin'ny fomba tsy tapaka ianao. Ankoatra izany, dia azo ampiasaina ny mampiasa fitaovana famerenana.
Ny tolotrao dia tokony hifaninana amin'ny maha mpivarotra azy bebe kokoa, miakatra any ambony izy.
Mba hahazoana boaty fividianana amin'ny Amazon, tokony hanana tantara lava lava sy mahasoa ianao. Amazona ny fitsidihanao mpanjifa sy ny salam-panidin'ny isam-bolana. Amin'ny ankapobeny, ireo vokatra izay vao haingana teo amin'ny tsena Amazon dia tsy afaka maneho ny mpivarotra.
Maro ny antony hafa mahakasika ny safidin'ny Amazon amin'ny mpivarotra iray voafantina. Na izany aza, ireo singa voalaza etsy ambony ireo no mahery indrindra. Ny vahaolana mahomby indrindra eto dia ny hahazoana antoka fa ny fifanakalozana azonao amin'ny alalan'ny Amazon dia mihazakazaka tsara. Mila manome mpanjifa amin'ny fanohanana ny mpanjifa tsara indrindra ianao ary miezaka manampy..
Ny fahatanterahan'ny Amazon
Ny fahatanterahan'i Amazon dia fandaharam-potoana noforonin'i Amazon mba hanampiana ireo mpivarotra an-tserasera mivarotra ny vokatra. Amin'ny fampiasana ity programa ity dia azonao atao ny mandefa ny entanao any amin'ny iray amin'ireo ivontoerana fanatanterahana amazonin'i Amazonia. Midika izany fa isaky ny mividy ny vokatra avy aminao ny mpanjifany iray, Amazon dia manipika azy ireo. Ity programa ity dia manampy anao hamonjy ny fotoanao sy hifantohana amin'ny lafiny hafa amin'ny fitantanana ny orinasa. Amazon dia mandray ny lafiny maro amin'ny fandefasana sy ny serivisy mpanjifa ary manitatra ny fahafaha-mividin'ireo vokatra ho an'ny mpikambana ao amin'ny Amazon, ary manampy amin'ny fandresena boaty fividianana.
Tips to make your products TOP searched on Amazon
Ny hatsaran'ny vokatra tsara dia tena zava-dehibe ho an'ny ambaratonga ambony amin'ny Amazon. Tsara ho marihina fa miresaka momba ny fanamarihana ao amin'ny lisitry ny pejy ianao, fa tsy momba ny tamberina momba ny mombamomba anao momba ny varotra. Hatramin'ny farany ny algorithm algorithm farany, voarara ny handefa mpampiasa hamerina famerenana ho an'ny fanomezana, fihenam-bidy, sns. Izany no antony ilainao hahazoanao fanadihadiana ara-boajanahary. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanaovana izany dia amin'ny fanomezana ny mpanjifanao amin'ny fanandramana tsara indrindra. Andramo ny tsara indrindra azonao hamokarana vokatra tsara amin'ny vokatra vokarin'ny vokatra rehefa mitondra any amin'ny lalao avo kokoa sy ny fitadiavana fikarohana kokoa, ary avy eo ny baiko sy ny varotra.
Zava-dehibe ny mampiditra ny teny fikarohana voalazanao ao amin'ny lohateny, ny famaritana, ary ny bala. Voalohany, mila manao fikarohana ianao ary mitady izay manan-danja indrindra amin'ny fikarohana momba ny orinasa izay azo ampiasaina amin'ny fampiroboroboana lisitra. Eo amin'ny sehatra faharoa, mila mampiasa ireto teny fanalahidy ireto ianao ao amin'ny lohateninao sy ny famaritanao mba hahatonga ny lisitra ho tsara sy hita amin'ny pejy am-pikarohana Amazon. Na izany aza, tokony tsy tokony handrodana ny lisitra misy anao ianao amin'ny alàlan'ny tenimiafina amin'izao fotoana izao fa ny algorithm Amazon dia lasa sintona ary mety ho voasazy noho izany. Izany no antony mahatonga ny lohateninao voajanahary, mazava tsara ary miezaka mametra ny mpividy amin'ny tsindry avy amin'ny valin'ny fikarohana. Mba hanamoràna ny teny fanentanana fikarohana ataonao, dia azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo fitaovam-pitenenana maoderina toy ny Google Keyword Planner na Amazon Keyword Tool.
Lisitry ny vokatra tsara
Ny lisitry ny vokatra tsara azo atao dia afaka manampy anao handroso lava lava. Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, nanome antsipirihany antsipiriany momba ny fomba hanatsarana ny lisitra ianao. Izany no antony hieritreretako fa tsy misy afa-tsy ny anton-javatra fanodinam-pividianana vokatra izay mety hisy fiantraikany amin'ny tsindry sy ny fiovan'ny klioba anao:
Anarana azo antoka sy mahasarika;
lohateny vokarin'ny vokatra;
Ny famaritana vokatra feno amin'ny karazana vokatra rehetra ilaina sy tombontsoa hita;
Toe-javatra bala mety;
Sarim-pamokarana kalitao ahafahana manangona;
Mametraka ny ahiahiny.
Ny isa dia voafaritra amin'ny mpanjifan'i Amazona amin'ny zavatra tsapany ho toy ny lanjany sy ny zavatra tiany mandany izany. Ny vidinao dia tokony handanjalanja ary mifototra amin'ny tendron'ny tsena. Azonao atao ny manangana na mianjera amin'ny vanim-potoana na amin'ny endrik'ilay dikan-teny vaovao avoakan'ny vokatrao. Ny vidinao dia tsy tokony ho ambany dia ambany satria afaka midika ho olana momba ny kalitaon'ny mpanjifa mety aminao. Izany no mahatonga azy ireo miezaka manandratra ny vokatra mitongilana amin'ny sandrinao.